यस्ता छन् प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने ८ टिप्स !! – NepalajaMedia
यस्ता छन् प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने ८ टिप्स !!
१.एकअर्कामा कनेक्ट:पार्टनरको हात आफ्नो हातमा लिनुहोस् । आँखा जुधाउनुहोस् । यो रोमान्टिक पलमा यस्तो कुरा गर्नुहोस्, जसले दुवैलाई रमाइलो महसुस हुन्छ । कुनै महत्वपूर्ण कुराकानी गर्नु पूर्व यस किसिमको अभ्यासले तपाईंहरूको आपसी समझदारी बढाउ“छ ।
२.एकअर्काको अपेक्षा बुझौं:कहिलेकाहीं हामी यस्तो सोच्छौ, पार्टनरले आफ्ना लागि विशेष केही गरोस् । यद्यपि उनलाई यस सम्बन्धमा केही थाहा नहुन सक्छ । अर्थात, तपाईंको अपेक्षा के हो ? पार्टनर यसबारे अन्जान हुन सक्छन् । त्यसैले यस्ता कुराहरूको सूची तयार गरौं, जसले आफूलाई खुसी राख्न सकोस् र पार्टनरबाट त्यही कुरा प्राप्त होस् । यस्तो सूची आफ्नो पार्टनरलाई पनि तयार गर्न लगाउनु पर्छ । पछि यो सूचीलाई आपसमा बदल्न सकिन्छ । यस किसिमले एकअर्काबीचको इच्छा, अपेक्षा थाहा हुन्छ । अतः आफ्ना पार्टनरालई खुसी राख्ने किसिमका व्यवहार अपनाउन सकिन्छ ।
३.प्रेम अभिव्यक्ति:कुनै पनि सम्बन्धमा सुरक्षा एवं विश्वास जगाउनका निम्ति प्रेम व्यक्त गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा कुनै आदर्श नियम छैन । आफ्ना पार्टनरका सामु प्रेम व्यक्त गर्ने सबैको आ–आफ्नै तरिका हुनसक्छ । तपाईं स्वयम् तय गर्नुहोस्, पार्टनरका सामु कसरी प्रेमको भावना व्यक्त गर्ने । एउटा गुलाबको फूल र ‘आइ लभ यु’ नोट लेखेर छोड्नु पनि प्रेम व्यक्त गर्ने मनपर्दो तरिका हो ।
४.आफ्ना लागि समय निकालौं:दाम्पत्य जीवनको अर्थ, पूरै घर गृहस्थीमा डुब्नुपर्छ भन्ने होइन । वास्तममा खुसी र सुखी दाम्पत्य त्यो हो, जसमा पति–पत्नीले आ–आफ्ना लागि समय व्यतीत गर्ने मौका मिलोस् । यसरी एक्लै समय बिताउने क्रममा उनले आफ्नो इच्छा, चाहनाको गहिराइ बुझ्न सक्छन् । यसैगरी समय बिताउनका लागि आफ्ना पार्टनरलाई पनि मौका दिनुपर्छ । यो क्रिएटिभ समयले तपाईंहरूको जीवनमा ऊर्जा वृद्धि त गर्छ नै खुसी पनि दिन्छ ।
५. परिवर्तनका सम्बन्धनमा चर्चा गरौं:परिवर्तन जीवनको नियम नै हो । जीवन सधैं एकनास रहँदैन । लामो जीवनयात्रामा धेरै उत्तारचढाव भोग्नुपर्छ, हामीले । अतः यस किसिमका उत्तारचढावका सम्बन्धमा दम्पतीले आपसमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले कुनै पनि संभावित समस्यका बारेमा मानसिक रूपमा तयार रहन सघाउ पुर्याउँछ । जस्तो, दम्पतीमध्ये एकको जागिर गुम्यो भने त्यस्तो परिस्थितिलाई कसरी सम्हालने ? यस्ता अनपेक्षित परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नका लागि दम्पतीबीच मानसिक तयारी हुन आवश्यक छ ।
६.खुसी आफैंभित्र खोजौं:हामी प्रायः दोस्रो व्यक्तिबाट खुसी खोजी रहेका हुन्छौं । सत्य कुरा यो हो, तपाईंको खुसी पार्टनरमा निर्भर हुँदैन । यो त आफ्नै अन्तर्मनमा निहित हुन्छ । दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय राख्नका लागि तपाईं खुसी हुन जरुरी छ । यदि तपार्इं खुसी रहनुभएन भने यसको सोझै असर तपाईंको दाम्पत्य जीवनमा पर्न सक्छ ।
७.थोरै रोमान्टिक हुनुपर्छ:जीवनलाई रोमान्टिक बनाउनका लागि त्यति धेरै खर्च गर्नु आवश्यक छैन । यसमा सानोतिनो कुराले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । एकअर्काले आदानप्रदान गर्ने सामान्य उपहार, अन्तरंग कुराकानीले पनि दाम्पत्य जीवनमा रोमान्स ल्याउन सक्छ । पार्टनरलाई के कुराले रोमान्टिक बनाउँछ ? बुझ्ने कोसिस गरेर त्यही किसिमको व्यवहार गरौं ।
८.बेडरुममा साथसाथ जाने:यदि तपाईं बेड सेयर गर्नुहुन्छ भने किन साथै बेडमा जाने बानी बसाल्नु हुन्न ? यसका लागि तपाईंहरूको सुत्ने समय एकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । पार्टनरको बानी चाँडै सुत्ने छ भने तपाई उनीसँगै गएर केही छिन बेडमा बसेर मनपर्ने पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ । जब पार्टनर सुत्छन्, तब आफ्नो बाँकी काम गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंहरूको प्रेम सम्बन्धलाई गाढा बनाउँछ ।
Prevश्रीमान र श्रीमती वीचको सम्वन्ध बिग्रिने कारणहरु
Nextठूलो पेट कसरी लुगा लगाउँदा लुकाउने ?
२३ बर्षिय केटाले आफ्नै सौतेनी आमालाई….